Nhau - Ndezvipi zvinhu zvinogona kukanganisa kunaka kweanokanda simbi vanogadzira?
Iyo mhando yeiyo castings ine simba rakakura pane echimakanika michina, senge impeller yemapombi akasiyana siyana, saizi yemukati mhango yeiyo hydraulic zvikamu, yakagadziriswa ganda, iko kurongeka kwetambo yekuumba uye nepamusoro roughness, nezvimwe. Matambudziko anozokanganisa zvakananga mashandiro anoita mapombi nema hydraulic masisitimu, pamwe nekuvandudzwa kwesimba rekushandisa uye cavitation. Aya matambudziko achiri akakura, senge iwo humburumbira musoro, humburumbira bhendi, humburumbira liner, uye kupera kwemukati injini dzemoto. Kana simba uye kutonhora uye kudziyisa zvivakwa zvekukanda senge pombi dzemhepo zvisina kunaka, zvinokanganisa hupenyu hweinjini.
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro nevakagadzira simbi, pane zvinhu zvakawanda zvinogona kukanganisa kunaka kwesimbi yakakandwa.
1. Kuti mashandiro ehurongwa uitwe, nzira inonzwisisika yekuita mashandiro inofanirwa kutanga yagadziriswa kana ichigadziriswa, uye panguva imwecheteyo, danho rehunyanzvi revashandi rinofanira kuvandudzwa, kuitira kuti maitiro agone kuitwa nemazvo.
2. Panyaya yekugadzirwa kwehunyanzvi, hunyanzvi hwekugadzira hunogona kuburitsa zvigadzirwa zvakanaka zvekukanda. Paunenge uchigadzira, iyo simbi yekukanda fekitori inoda kuona saizi uye chimiro chekukanda zvinoenderana nemamiriro ezvinhu ezvakatipoteredza uye zvinhu zvemidziyo yesimbi. Uye zvichingodaro, isu tinofanirwa zvakare kufunga zvine hungwaru dhizaini kubva kumativi eiyo yekukanda maitiro maitiro ekudzivirira zvisina kukwana kuremara.
3. Kune hunyanzvi hwekukanda, iyo simbi yekukanda fekitori inogona kusarudza yakakodzera chimiro uye yepakati-yekugadzira nzira zvinoenderana nechimiro, saizi, huremu uye inodikanwa mamiriro ekukanda, uye kumisikidza rumbabvu kana kutonhora simbi, kudira system uye kukanda. system zvinoenderana neizvi. Riser zvichingodaro.
4. Panyaya yezvinhu zvakagadzirwa, vagadziri vanofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune mhando yezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa mukukanda. Hunhu hwezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa mukukanda zvinofanirwa kusangana neyakajairwa, zvikasadaro zvinokonzeresa kuremara senge porosity, pinholes, kunamira kwejecha uye slag kuiswa mune iyo castings, iyo inokanganisa zvakananga kukanda. Iko kutaridzika kwemhando uye yemukati mhando yesimbi, kana iri yakakomba, ichaita kuti kukanda kuve kwakaraswa zvakananga.
Hunhu hwezvigadzirwa hunonyanya kusanganisira matatu marudzi: chitarisiko chemhando, yemukati mhando uye yekushandisa mhando:
1.Kuonekwa kwehunhu: kunyanya inoreva kuomarara kwepasirese, kutsauka kwehukuru, kutsauka kwechimiro, hurema hwepasirese uye kutsauka kwehuremu, nezvimwewo, izvo zvinogona kucherechedzwa zvakananga, zvese hunhu hunoratidzika;
2. Intrinsic mhando: Inonyanya kureva makemikari anoumbwa, zvemagetsi zvivakwa uye zvemuviri zvimiro zvekukanda. Kazhinji, hunhu hwemukati hunogona kungoonekwa chete nekutadza kwekukanganisa. Iko kukanganisa kwekuona kunogona kuona kana paine inclusions, maburi, kutsemuka, nezvimwe mukati mekukanda. kukanganisa;
3.Shandisa mhando: kunyanya kugadzikana kwekukandwa munzvimbo dzakasiyana, senge kupfeka kuramba, ngura kuramba, kuneta kuramba, machinability, uye weldability.